Ngaba kufuneka uthathe okanye uyaliwe iyeza le-Covid-19 ukuba ngaba kunyanzelekile? Kwenziwe ntoni? : UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	14 Meyi 2020	• 45 Comments
Ngokuthe ngcembe, abantu abaninzi ngakumbi bayaqala ukubona ukuba oorhulumente kwihlabathi liphela bafuna ukwenza utshintsho oluzinzileyo kuluntu luphela. "Isitshixo esiqondayo" ngokuthe ngcembe siyaguqulwa sibe yinto esisigxina, apho kuya kufuneka uyithengise kwakhona inkululeko yakho. Into eqhelekileyo iba yimitha nesiqingatha soluntu kwaye kuya kufuneka uzihlawulele ngokwakho.
Unokuqesha abacebisi ababiza imali eninzi ukukucebisa ngendlela yokuseta inkampani yakho kwimitha enye nesiqingatha kwaye ungabala itikiti lexabiso; ithegi yexabiso lakho kuba kuya kufuneka ufumane imvume esemthethweni yamanyathelo akho kunye nethegi yomthengi, kuba umntu kufuneka akhweze loo mitha inesiqingatha nesiqingatha kunye nokwehla komvuzo okubandakanya.
Ukongeza, iyeza le-covid-19 elizayo liza kunyanzeliswa.
Ngaphandle kombuzo wokuba isitofu sokugonya sivavanywe ngokupheleleyo kwaye asikho kude kumbuzo wokuba ngaba sifuna into enye nesiqingatha semitha yoluntu: oorhulumente bayadidizela kwaye ngokwenene abayi ebantwini abaqhankqalazayo mamela.
Itekhnoloji iyakusetyenziswa ukubeka iliso kuwo onke la manyathelo. Sele ndiyichazile loo nto incwadi yam ngo-2019 kwaye sele ndixela kwangaphambili ukuba kumanqaku amaninzi kwiminyaka yakutshanje. Obu buchwephesha kunye nedatha enkulu iya kutsalwa nje, kuba zininzi kakhulu iinkampani ezinokufumana i-nibble enomdla kwakhona. Baninzi ngoku basebenzela iinkampani ezinkulu ezibonelela ngezisombululo ze-ICT okanye iiarhente zikarhulumente eziqinisekisa ukuba ziyaqhubeka nokuhlawulela umzi wazo nokugcina usapho lwazo. Abo bantu banokubona ukuba kukho into engalunganga, kodwa xa kuziwa ekukhetheni, uninzi lukhetha ukugoba ngaphezulu ukuqinisekisa umvuzo.
Sonke siyayazi ngoku ukuba le meko intsha iza kujongeka njani. Amajelo osasazo kunye nesizwe bayaqhubeka besithi ukuthengisa kuyafuneka kwaye indlela eyaziswa ngayo inyathelo ngenyathelo. Inyathelo ngenyathelo, ukuze abantu baqhubeke nokukholelwa ukuba ngamanyathelo ayimfuneko okuqulatha i-coronavirus.
Inkqubo izakuhamba ngamaza ukusuka 'ekuqiniseni ibhanti' ukuya kuthi ga nje kwi-reins entwasahlobo 'emva koko kufike igagasi elilandelayo. Amajelo eendaba, iingcali (ukuveliswa kwamanani) kunye nezopolitiko ziya kusibonisa, emva kwethuba lokusebenzisa umitha omnye nesiqingatha kunye negumbi elingaphezulu lokuhamba, ukuvuselela intsholongwane ye-corona, emva kokungeniswa kwenxalenye elandelayo yepakeji ngabantu Uyakwamkelwa.
Abafundi kwezinye iindlela zosasazo bahlala bekhangela ulwazi malunga nendlela esidlalwa ngayo. Sithanda ukufunda ngohlalutyo olunzulu malunga nokuba ngaba kuyingozi kangakanani na isitofu sokugonya, ukuba i-5G ingasetyenziswa njani ukusichaphazela, indlela amalungelo obunikazi eMicrosoft asinika isatifiketi sokugonyela zedijithali, indlela uBill Gates atyala ngayo kwimithombo yeendaba kunye nogonyo, ukuba iinkqubo zingasetyenziswa njani ukusinceda ukubeka esweni. Silambele ulwazi malunga nendlela esiqhutywa ngayo kwiwebhu ukuze sikwazi ukungcungcuthekisa abanye malunga nengozi ezayo.
Ibaluleke kakhulu loo nto, kuba ukuba awazi ukuba yintoni ingozi ebaleka kuwe, awitsiqi ecaleni. Nangona kunjalo, kufuneka kubekho inyathelo elilandelayo. Kufuneka size nezisombululo.
Apha kwiwebhusayithi ufunde amanqaku aliqela malunga nokuba singaya njani kuluntu apho kungekho mali ingaphezulu, uluntu apho iinkqubo, iikhamera kunye nedatha enkulu zisazi ngqo apho sikhoyo okanye sinalo iqondo lokushisa elifanelekileyo (akukho covid- 19) kwaye sinxibelelana nabani sonke. Inyathelo elilandelayo kukudibanisa yonke le datha kunye nohlobo lwenkqubo yamanqaku. Ngamanqaku okanye angenawo amanqaku awaneleyo anokuthi okanye angahambi ngaphandle, ngololiwe okanye ngenqwelomoya. Sonke singayichaza kwangaphambili ngoku. Ikhonkco layo yonke loo datha ukuya kumanqaku edijithali kunye nekhonkco kwibhanki yakho yedijithali eligqibezela ibali.
Sikhokelwa kwiwebhu kwaye i-China ibonelela ngomzekelo wendlela njengorhulumente ongabanyanzela ngayo abantu ukuba babambelele kuyo. I-China ikwabonisa indlela umntu omi kuyo ngokuchaseneyo ashiywe nje ngaphandle. Esi sisiphumo esizenzekelayo senkqubo enjalo. Ekugqibeleni, abantu abaninzi baya kuqubuda kuyo, ngokuyinxenye kuba uninzi kuluntu ngokwalo lisebenzela iinxalenye zenkqubo 'yenkqubo'. Ukuba unomsebenzi kwi-ICT kwaye ubonelela ngesoftware yedatha okanye unikezela ngeenkqubo zekhamera, ukuba usebenza njengegosa eliphandayo okanye njengepolisa, usayikhetha umvuzo wakho. Yindlela enjalo.
Kukuphambuka ukuthi, "Emva koko ndilahla i-smartphone yam ukuze ndiphume kwinkquboMsgstr ". Siya kwixesha apho ukuthatha inxaxheba eluntwini kube yinto engenakwenzeka ngaphandle kwe-digiD okanye ngaphandle kwe-eHerkenning (kwiinkampani). Kuya kwenzeka okufanayo nangetekhnoloji entsha yekorona. Ukuba uyilahlile i-smartphone yakho, awuyi kuphinda ukwazi ukungena esitolo.
Ngaba iya kuza? Inyathelo ngesinyathelo ngokuqinisekileyo iya kuza kulokho. Kwaye ke ungasinda kuphela ukuba unayo eyakho intsimi yegadi, kodwa ke kuya kufuneka ufumane nembewu yakho kuyo, kuba ukuzanelisa kwakho kuya kuvumeleka nakwixesha elide.
Isinyathelo esilandelayo iya kuba kukuba awusavunyelwa ukuba ungene kwiindawo zikawonke-wonke ukuba awukhange ugonyo. Kwaye idatha enkulu iya kudlala indima koku. Ukuba i-app yakho ithi ulufumene isitofu sokugonya, isango lokungena esitolo liza kukuvumela ukuba ungene; ngaphandle koko. Kwinqanaba lokugqibela, iapp enjalo inokuthi ithathelwe indawo yimpawu zedijithali ezixhumene nomzimba wakho. Kwaye iya kugqitywa kuphela ukuba ibhalansi yakho yebhanki ikwadityaniswa nayo yonke le nto. Kungekudala akusayi kubaleki ngaphandle kokuba ukhetha ukuhlala 'endle', kodwa kwabaninzi okuya kuba yibhulorho kakhulu.
Singakhwaza esikufunayo; singakhwaza sithi asiyifuni yonke loo nto, kodwa kufana nesikhalo entlango. Uninzi luxhomekeke 'kwinkqubo'. Kungenxa yoko lixesha lokuba uqale ukucinga: Ukuba awukwazi ukubetha 'em ,joyina' em.
Kufuneka size nezisombululo zeekhonkrithi ezinokwamkelwa kwakhona ngabo basebenzela 'inkqubo'. Kufuneka size nezisombululo ezibambekayo nezinokwenzeka eziqinisekisa ukuba abantu abaphulukani nezinto ezithile, kodwa banelizwi. Ngoku sixhomekeke ngokupheleleyo kwizigqibo ezimiselweyo ezivela phezulu. Inkqubo yangoku yezopolitiko isinyanzela ukuba samkele ezo zigqibo ngaphandle kokuthatha inxaxheba. Oku kunokwenziwa ngokwahlukileyo. Oko kufuneka kwahluke.
Kukho ithuba! Emva kwayo yonke loo nto, kukho ithuba lokutshintsha izinto ngeteknoloji enye ngoku, ngaphandle kokujika ujonge uluntu luphela. Ayifuni imvukelo okanye uguquko olukhulu oludumileyo. Wonke umntu unokuqhubeka nokwenza oko bakwenzayo.
Into kuphela etshintshileyo sisigqibo sesigqibo. Abaphathiswa kunye namagosa ngoku enza ingxelo kwisithsaba kwaye atyhalela phambili nemithetho ngaphandle kwemvume yabantu kwangoko kufuneka anike ingxelo ebantwini. Abaphathiswa kufuneka bathathelwe indawo ngabameli abonyulwe ngokuthe ngqo ebantwini (ababamela ngokwenyani abantu endaweni yesithsaba).
Konke oku kunokwenzeka ngomgaqo wentando yesininzi ngqo. Kule demokrasi ngokuthe ngqo, ukhetha abameli bakho kwi-intanethi. Unokuba ngumgqatswa ngokwakho okanye ubonise abagqatswa kwaye inkqubo yokuvota iqinisekisa ukukhethwa nokukhula kwenkxaso. Yinto efana neenkqubo zokuvota njengeTalente yeHolland kunye neenkqubo zeTV. Itekhnoloji ikhona, amathuba akhona kwaye aya kusebenza.
Amalungu ePalamente anyuliweyo kufuneka enze lula imithetho aze ayingenise ebantwini ukuze yamkelwe okanye iphononongwe. Ukusuka kumawaka emithetho, ukucaciselwa, ukusuka kubungakanani ukuya kumgangatho. Uthatho-nxaxheba loluntu ngokuthe ngqo.
Sinokulinda kude kunyanzeleke imithetho yogonyo ivume ukuba sikhethe ukuthatha isitofu okanye siye ejele, okanye singabamba amandla. Kuya kufuneka siyibambe le ngxaki ukuze senze utshintsho. Guqula indlela esifuna ngayo! Idemokhrasi ethe ngqo inokuthi ithathe indawo yamandla ekhoyo ngenkqubo yokuvota kwi-Intanethi kwiinyanga ezimbalwa.
Ngoku lixesha lokuba nenze inkxaso yoku. Faka ithuba, cinga ngalo kwaye ufunde ukuba lisebenza njani. Lixesha lokuba uthathe into kwaye ube lutshintsho. Cinezela iqhosha ngolwazi oluthe kratya kwaye usayine uxwebhu lwezikhalazo.
I-Coronavirus covid-19 amanyathelo okutshixa okwandiswa ngo-Epreli 6 kwaye aya esiba nzima kakhulu
tags: ngaphezu, apps, enkulu, Covid-19, idata, wentando, ngqo, er, eziziimbalasane, I-fvvd, igubu, Ndiyala, online, kuvota, te knoloji, lokugonya, lokugonywa, Uxanduva lokugonya, ukuzibophelela, wat, ukwala, ukwala, mithetho
14 Meyi 2020 kwi-12: 22
14 Meyi 2020 kwi-13: 16
Kodwa sisimahla uMartin, uJan Peter udlala indima yobuvulindlela
Owayesakuba yi-Nkulumbuso u-Balkenende ufuna isitofu sogonyo sabantu bonke
14 Meyi 2020 kwi-13: 26
Ewe sonwabile, kulungile ke, akukho nto ingakukhathaza.
Isimahla = kumbiza werhafu kwaye ke ekugqibeleni kuya kunyuka irhafu = akunasimahla
17 Meyi 2020 kwi-15: 23
Uqinisekisile ukuba oku kuza e-Madurodam, kwakamsinya ukuba ubunzima obukhulu bubangelwa yile ndyikityha, incochoyi yomlomo ilungiselelwe utata. Iimbers ezaneleyo zokwenza umsebenzi omdaka ...
UMichael Gove utyhila ngaphaya kwe-17,000 ye-coronavirus tracers zoqhakamshelwano ngoku - abantu baneentloni nje kwi-18,000 ekujoliswe kuyo - ngeli bango baqeshwa kwiinyanga ezintathu zokuqala.
14 Meyi 2020 kwi-13: 23
I-Covid, ke ngoko simele iSiqinisekiso seZitifiketi zokugonywa (2020)
14 Meyi 2020 kwi-13: 33
Banike umnwe 🖕, bathi HAYI
14 Meyi 2020 kwi-14: 41
I-19 ngasemva yeCovid imele i-AI, ukuba uguqula oonobumba ngamanani. Ke isiQinisekiso seSazisi soGonyo seNzululwazi.
Sinokuqikelela apho yonke idatha ebiweyo iphela, inkqubo yePalantir yenyani! Khangela umkhondo kunye nomkhondo
14 Meyi 2020 kwi-15: 33
@riffian Ngqo !!! I-AI idinga ukondliwa kwedatha, oh ibiwe yeah kunjalo!
Sifuna iimpendulo ezingxamisekileyo malunga nedatha enkulu ye-NHS ye-COVID
Kutheni urhulumente wase-UK enqaba ukukhupha iinkcukacha zokudluliselwa kwedatha 'engazange ibonwe' kwii-tech ze-US ezinkulu? Ukuba asizifumani iimpendulo, sinokuzifuna ezinkundleni.
14 Meyi 2020 kwi-14: 58
Ividiyo emnandi, ngakumbi le yokugqibela sisiphelo kunye NDIYE, funda injongo, yinjongo. Iirisk zihlala zitshitshisa amagama.
Apha kwakhona abafundi abatsha. Ngethamsanqa, kongezwa ezinye ngakumbi. Abantu baphinde banikele ngento enceda uMartin rhoqo. Ngokucacileyo isandi sakhe sinokuthenjwa kwaye sikrelekrele. Awuyifundi naphi na enye indawo. Indawo yakhe kufuneka igcinwe phezulu emoyeni. Jonga inqaku lakhe malunga nokuhlaselwa kwe-Ddos kwindawo yakhe
Oko kubaluleke kakhulu kunevidiyo esusiweyo yeJensen 33. Yeyiphi, ewe, kwavunyelwana ngayo no-Yt. Ngokuthengisa ihempe yakhe, kwaye uthi kuya kulunga. Uhlala eVondelpark, ke unemali njengamanzi. Ndiyaphumla ecaleni kwam.
Qaphela kwakhona ukuba uJensen uthetha kangaphi ngesihlangu sejoni entanyeni yakhe.
Kwaye apha kwakhona isikhumbuzo sokuba kutheni ngokuqinisekileyo ungafanele uthathe loo mpu. Ukuba ufunda njengale ndawo kule ndawo, kwaye ufumana ulwazi ngamanani. Ngaba uyazi ukuba kuya kufuneka okanye ungakholelwa kuyo yonke into la manani akhankanyiweyo kuyo. Kwaye ngokuqinisekileyo ungavumeli ukuba ungene emzimbeni wakho.
14 Meyi 2020 kwi-18: 34
Vumelana. Andikufumani yonke into ebhalelwa nguMartin okanye acetywayo, ngamanye amaxesha ayifumane igqithe kakhulu okanye ayikho ngqiqweni, kodwa ngesandi sayo esikhethekileyo yena ungumzekeliso 'we-canary kumgodi wamalahle' wenkululeko yokuthetha eNetherlands. Le ndawo KUFUNEKA ihlale isebenza kwaye iqhuba, kwaye ngokwenene: abatyeleli nabaxhasi abaninzi, abangcono.
Ndingavumelana nenqaku elingezantsi, kodwa ndakholelwa ukuba utshintsho olucetywayo kufuneka lusasazwe ngaphezulu kwexesha elide (ukuba ufuna ukufumana abantu abaninzi kangangoko kunokwenzeka, kwaye ukhetha namanye amazwe). Abantu kufuneka benziwe kuqala 'ukuvuthwa' ngenxa yotshintsho olunje. Ngaphandle koko, baninzi abayoyika, uya kufumana ubundlobongela, isiphithiphithi, usizi, kwaye ayinakuba yile njongo.
Thelekisa i-wmb nomntu onemilenze ebandayo kwi-degrees ezingama-30 ebusika baseSweden. Ukuba uyifaka kwangoko phantsi kweshushu eshushu, uya kwenza ukuba umonakalo ungabi nakulungiswa. Kuya kufuneka ngokuthe ngcembe, kwaye kunjalo nangabantu abaninzi. Banike iminyaka eli-10 yokwenza oku (nangona ndinoloyiko lokuba asinayo iminyaka eli-10 yokuthintela umthetho wangoku wemfazwe ukuba ungabi sesisigxina samapolisa).
14 Meyi 2020 kwi-20: 33
Ndifumana ithoni yokuthoba umva 'yokungafikeleli' kunye 'nokugqithileyo' ayilunganga kakhulu. Ukuba elinye iqela alikho ngqiqweni kwaye lixakeke kakhulu, nguloo mntu uvaliweyo ukuvala umnyango.
Ayisiyoyo le ngcinga ka Xander apha kule ndawo ibalwa njenge-gauge kwaye sibala isigwebo sakho sikaThixo X. Lixesha lokuba ulahle olu hlobo lokugxeka kwaye uthathe isenzo. Yiba lutshintsho ngokwenza.
Ndiyakholelwa kakhulu ukuba inkqubo entsha ecetywayo kwi-fvvd.nl kufuneka isetwe ngaphakathi kweenyanga ezimbalwa. Asinaxesha lokuchitha.
Ndiyazigatya izimvo zakho. Ukuba silinde ezinye iinyanga ezimbalwa, ikhabhathi yangoku iguqule uluntu lonke ukuba lube yimitha enye enesiqingatha kwaye zonke iintlobo zeendlela zetekhnoloji ziyenziwa zisibeka kwindawo yolawulo lobuzwilakhe.
Ndingathi ke: musa ukuyibeka kwithreyi ende kwaye uyikhuphele njengento engenamsebenzi. Kukugqwesa kwaye akukho ngqiqweni ukuba sihlala sikhalaza kwaye sibhala amanqaku apho konke kungahambi kakuhle kwaye apho ugonyo kunye nezatifikethi zedijithali zinokusenzakalisa khona.
Kubugwala ukuyibeka ekukhuleni kwabantu. Abantu kwakhona abakakulungelanga ukwenza la manyathelo atshixiwe kwaye ngoku siyabona ukuba urhulumente unyanzelisa amanyathelo 'angenangqondo' kunye 'nawokugqibela' kwiiveki nje ezimbalwa.
Ke nditsho ukuthi HAYI kakhulu rhabaxa ekugxekeni kwakho kwaye ndicebisa ukuba ubize abantu ukuba Thatha isenzo NGOKU. Yimizuzu eyi-1 ukuya kwe-12 kwaye asinakulinda iminyaka eli-10.
Unokubuza imibuzo kwicandelo lombuzo kunye neempendulo zale ndawo: https://www.fvvd.nl/qa/
14 Meyi 2020 kwi-22: 14
URose wabhala wathi:
15 Meyi 2020 kwi-07: 03
Abaphilisi abapholileyo benza amanxeba anukayo…
Abantu kufuneka bashukunyiswe, kodwa kubonakala ngathi bakwimeko emaxekweni.
15 Meyi 2020 kwi-16: 01
Ndifumana impendulo yakho kwi-Xander icocekile icocekile kakhulu kuba ndinezikrokro ezinamandla zokuba i-Xander ayisasebenzi. Andizukuyichaza loo nto. Umntu ofunda rhoqo unokuyazi into endithetha ngayo.
14 Meyi 2020 kwi-13: 37
14 Meyi 2020 kwi-15: 01
Kuyamangalisa ukuba andikaze ndiyibone loo kliphu, ndingazange ndifunde iTV kwaye ndiyijikile iCD ngwevu. Ngokwenyani akaqondakali ukuba uza kuba yikliphu. Kwaye kwakhona ndingumntu othanda umculo weli bhendi. Ngeentsuku zakudala.
14 Meyi 2020 kwi-13: 56
Inkqubo yokuqikelela ngaphezulu, iskripthi sele sibandakanyiwe kwi-Dead Zone - PLAGUE uthotho ngo-2003
14 Meyi 2020 kwi-15: 47
I-idd ebaluleke kakhulu kukho konke ukuthetha malunga ne-corona (ra33oon), Ukuwa ezantsi ukusuka ngo-1993 kunye ne-douglas eqhelekileyo yomsolwa yayihlukile kubuso be-ur.
amashumi ezigidi zabantu akasayi kubakho mfuneko.
14 Meyi 2020 kwi-14: 06
Abodidi eliphakathi / udidi luya kuncitshiswa ngokupheleleyo imali ubuncinci omnye unyaka, ukuze kungekudala banikezelwe kwi-State State njengamatakane.
14 Meyi 2020 kwi-15: 09
Ewe kunjalo. Ngale ndlela wonke umntu uxhomekeke ngokupheleleyo. Ungacingi ngokugxekayo kuba ugciniwe. Kusindiswe kuphela ngendlela yokuba ndicinga ukuba ungalifumana izulu ngcono. Kwaye ke umsindisi wakho ukwanguye owatyhalela ngabom wena nosapho lwakho enzonzobileni. Kodwa baya kuqala ukuyibona ngokwahlukileyo. Kude kube kusemva kwexesha kakhulu, emva kwayo yonke loo nto, iyeza lokugonyela lisenokuba sele lifakwe ebantwini kumazwe angaqinisekiswanga kuyo nayiphi na imeko. Vuya kubarhanelwa abaqhelekileyo, kwaye uzilungiselele ngokwabo ukungazifaki. Ngaba lo machiza unokukonzakalisa nangayiphi na indlela. Olo lungiselelo ngokwenyani libalisa ibali lonke.
14 Meyi 2020 kwi-15: 28
Nantsi enye ingcuka yokunxiba kwegusha uEric Schmidt, bonke abarhanelwa abaqhelekileyo babandakanyeka kolu qeqesho lokugqibela lobukhoboka. Kwaye zikwabandakanya ubume bemozulu kwiajenda yabo ngelixa bexakekile
Nxibelelana neQela lokuThengwa elixhaswe nguSoros kunye neeGates, uneCloud Clinton kwiBhodi
'kufuneka' sibe nombulelo 'ngemibutho emikhulu ethi' abantu bathande ukulimaza '(Siyibiza le FASCISM)
Ividiyo ifihliwe, ngokuchanekileyo isebenza njani.
14 Meyi 2020 kwi-15: 37
https://www.cbsnews.com/news/trump-economic-club-speech-live-stream-president-trump-at-the-new-york-economic-club-today-2019-11-12/ (UTrump uyinxalenye yengxaki, ulibale uQbshshit. !! Ndithembe icebo, sisicwangciso sabo)
14 Meyi 2020 kwi-17: 20
UTrump uthandela iyeza, jonga ukuba iQ Q isabela njani kulo.
15 Meyi 2020 kwi-16: 41
QAPHELA: Isicwangciso sikaTrump 'sesibetho' sokuba unobhala oshicilelwe wasindiswa kwingxelo yemfazwe wayephethe - eyayilumkisa ngokushokoxeka kwezonyango, inkxaso mali engonelanga, kunye nokudideka okwenziwe kwi-federal kwiinyanga nje ngaphambi kokuba kuqhume.
20 Meyi 2020 kwi-18: 50
14 Meyi 2020 kwi-15: 46
Bona apha ukuba ngobuchule bawudlala njani loo mdlalo. Babonisa ngokoqobo into abaza kuyenza. Funda abantwana abavela kwiintsapho. Phantsi kwesikhokelo sempilo, kwaye ngenxa yokuba awunayo iibhafu ezimbini zokwahlulwa. Kodwa umntu makakuxelele ukuba ngubani ochasene nayo. Kwaye ibonelela ngokungadlali kakuhle. Kodwa unenombolo ebhaliweyo, ebizwa ngokuba ijonge omnye komnye. Kwaye ke banenombolo yakho yokufumana umkhangeli. Ewe, umntwana wakho akasayi kuphinda akubone, kwaye akufanga ngeCovid. Umbhalo 2, funda 80123 kunye no-9. Kwaye lahla yonke into onayo. Yenza iMelika …………… .. kakuhle
Jonga nje umlingisi, kwaye uya kubona ukuba bangenela ntoni.
14 Meyi 2020 kwi-16: 31
Isithembiso sokuthobela uMyalelo weHlabathi eNtsha
14 Meyi 2020 kwi-21: 56
15 Meyi 2020 kwi-03: 25
Nabani na okhe wavota ebomini babo makasayine esi sicelo. Ngoku singabona ngokucacileyo ukuba kwenzeka ntoni xa uvumela oonodoli boomabonwakude balawule ubomi bakho. Ukuba kuphela ukufumana ingqalelo ukuba isekwe kubuxoki, njengoko funda kweli nqaku. Ukuvota kwakhona kusithathela nangaphaya kukuzivalela.
Ngokuqinisekileyo andiphathi chip okanye ugonyo, kodwa thintelwa. Ngayiphi na imeko, kufuneka sibuyele kwindalo ukuze sizifumane. Nditsho no Yesu kwafuneka ahambe aye entlango ayokuxhuma. Anditsho ukuba kufuneka ukholwe kuYesu, ndithetha nje ukuba sikwindlela enye.
15 Meyi 2020 kwi-06: 30
Kulungile ukuba kusekho ogqirha abanjengoGqirha waseJamani https://www.youtube.com/watch?v=6bIAXtciwk0&feature=youtu.be
15 Meyi 2020 kwi-06: 59
Kwividiyo kagqirha waseJamani kwikhonkco elidlulileyo uthi yona inyani iyinyani .. Kwi-vein yokuthetha ukuba masingaphindi sibuyele "kwinto yesiqhelo yethu". Oku kuyinyani, kuba kuthetha ukuba indala iye yenza ukuba sikwazi ukusiqhubela kwimeko esikulo ngoku. Ke kukho imfuno entsha eqhelekileyo, engeyiyo i-1,5 yeemitha yoluntu kunye nazo zonke iindlela zokujonga, kodwa into eqhelekileyo entsha ehambelana nenqaku le-FVVD kaMartin. Mhlawumbi oku kungabandakanywa kumyalezo we-FVVD?
15 Meyi 2020 kwi-09: 48
Ndiyakholelwa ukuba umyalezo kaMartin ucacile!
15 Meyi 2020 kwi-08: 18
Ubuncinci kum "endle". Ngokukhawuleza nje ukuba sibe ngumbuso opheleleyo wenkunkuma ndipakisha izinto zam kwaye ndihambile. Ndingathanda ukubulawa yindlala kwenye indawo embindini wayo nayiphi na indawo kunokuba ndicuthwe inkululeko yam.
15 Meyi 2020 kwi-09: 47
Andicingi ukuba ungahamba xa imeko yamapolisa igcwele. urhulumente wamapolisa = inkqubo ye-feudal, uyinxalenye yelizwe. Kwinkqubo ye-feudal, ikhoboka alinakho kwaye akufuneki lenze nantoni na ngaphandle kwemvume yomnini / ilizwe.
Ngapha koko, ufuna ukuya phi yonke into idityanisiwe kwilizwe jikelele, iququzelelwe kwaye ilawulwa zii. Ndiyabuza ukuba abahlali ongathanda ukuya kubo bakulindile na. Ukhuphiswano lukhona phakathi kwabantu. Sikwimeko enzima kwaye ke kufuneka sisombulule ngokwethu apha eMadurodam. Isininzi esiqhelekileyo asiyiqondi ngokuthambekela okungapheliyo.
16 Meyi 2020 kwi-10: 51
Nantsi uMartin ulungile ngayo yonke loo nto yokungcungcutheka, kwaye ikakhulu ziziphumo zentsimbi.
Kwaye isiqwenga esingaphantsi sisuka kwiimfundiso ze-Freem times kunye neendaba yabo. Ngamanye amagama kufuneka siphendule ngokukhawuleza. Ke uyayibona into enokufunyanwa ngumntu kwisicatshulwa esineelebheli. Izinto ezisongela ubomi, kwaye ngokubeka nje, bafuna ukukubulala, kwaye bazenzele ilizwe elitsha. Indlela esihogweni abantu abaninzi ngayo bazidibanisa nale mfundiso.
I-induvidual iphathwe ngesandla ngokuza ubuso ngobuso kunye neyelenqe.
Mkhulu kakhulu umntu akakholelwa ukuba kufanelekile.
ISodosite, iPedophille, engama-33 Freemason. J Edgar Hoover
Umlawuli we-FBI, yintoni iyelenqe?
Uyathetha nangeGileyadi, umenzi wokugonya. Yintoni ngesiHebhere emele uGaleed.
Funda imfumba yamangqina igama chaldee elilingana neGaleed in hebrew. Zombini eziphawula imbonakalo yomnqophiso. Phakathi kukaJacob kunye ne-laban gen 31: 47 (oku kubonisa ukuba balandela ntoni, bangafumani mntu ibhayibhile)
Upapa uFrancis encyclical uLaudato si (iphepha lokufundisa) ufuna ukubulala abantu abazizigidi ezi-6.
Jonga ingcaciso: Kwaye yintoni abafuna ukuyenza. UTrump naye ubonakala ebiza emkhosini ukukhusela wonke umntu, efundile efile. Kwaye iMelika, enezixhobo ezizimeleyo ezizigidi ezingama-400 ezandleni zayo, nayo iya kuhlala ngokuzolileyo. Bizarre ukuba unokufumana imeko enjalo. Kwaye andilukhuthazi ubundlobongela. Kodwa abarhanelwa abaqhelekileyo benza njalo.
17 Meyi 2020 kwi-12: 21
Ndingazala nezovavanyo, kuba zinokugcwalisa neenkcukacha zeDNA. I-Die Schippers ngoku ise-DSM kwaye intloko yangaphambili ye-DSM Sijbesma ngoku inoxanduva lweemvavanyo. Bukela ii hares zigijimayo, abarhanelwa abaqhelekileyo badlala ngamacala omabini, vuka !!
Umdaniso wesihlalo ugqibile
17 Meyi 2020 kwi-18: 21
Ukuba isangqa kubahlobo, iyacekisa… .. Kuyinto entle ukuba yacaciswa kuthi kwimizuzu eyi-13.33. Imnandi njani le ngxaki! Kwaye amnandi amakhoboka. Ngelishwa, amakhoboka adla ngokuba ngabantu bezazela. Andinakuthetha ngayo yonke le midlalo.
17 Meyi 2020 kwi-14: 29
Kutheni isitofu sokugonya ukuba sikhona amayeza aneleyo ngokuchasene nokuhlukahluka komkhuhlane?
I-WHO inikezele nge-20M yeMali yokuNyoba kwi-Poison COVID-19 Cure-uMongameli waseMadagascar
NguGreatGameIndia -May 16, 2020
Kuphuhliso olothusayo uMongameli waseMadagascar wenze isimangalo sokuba i-WHO yanika isityhwentywe semali engama-20m etyhefu nge-COVID-19. Unyango lwe-herbal olubizwa ngokuba yi-COVID-19 Organics ezenziwe kwa-Artemisia lunokunyanga iziguli ze-COVID-19 zingaphelanga iintsuku ezilishumi utshilo uMongameli.
18 Meyi 2020 kwi-13: 33
ENigeria, isiseko se-billy goates isephantsi kweglasi yokukhulisa emva kwezityholo zokunyotywa, iBurundi kunye neTanzania zikhuphele i-WHO / melinda kunye nezinto zebhili. Ke kunokwenzeka kwakhona, singathatha umzekelo apha.
18 Meyi 2020 kwi-18: 05
Ndisaqhubeka nokumangaliswa yi-BMF. Kwaye ngakumbi ukuba baninzi kakhulu abantu ababakhusela izinyo kunye nezipikili. Kuba ubapha kakhulu izisa. Ngelixa esenza ukuba abuyele ubuncinci beepesenti ezingama-80 kutyalo mali. Ukuba uBill wayelungile ngokwenene loo nto, yena nabahlobo bakhe abazizityebi ngesele basindise umhlaba kwindlala nonxaniwe ixesha elide. Endaweni yokudlala ukwahlula kunye nokulawula kumhlaba wakhe wovavanyo wehlabathi. Oko akakwenzi, kwaye usebenzisa abantu njengezilwanyana zovavanyo. Abantu kufuneka beme phandle. Banemali eninzi, banokulungisa zonke iintlungu emhlabeni ngeveki. Akukho kulamba kunganxani, kungabikho mfazwe ingako yokufa kwabantwana njlnjl njl njl. Izibophelelo zohlobo olusezantsi, ngelishwa eyona mali ininzi.
20 Meyi 2020 kwi-08: 46
20 Meyi 2020 kwi-10: 46
20 Meyi 2020 kwi-13: 42
23 Meyi 2020 kwi-15: 43
« Ukuthoba okukhulu kwexabiso lemali ngexesha lengxakeko ye-corona kukhokelela kwisiphumo se-hyperinflation: ngaba i-bitcoin isisombululo?
Isibophelelo esichasene neMicimbi kaRhulumente u-Jordie Zwarts utshona kwiitoni, kodwa akaphumeleli nto »
Utyelelo lulonke: 2.521.658